Musiibadii Arsenal ka qabsatay Man City - BBC News Somali
Musiibadii Arsenal ka qabsatay Man City
Dabaaldega kooxda Man City
Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ku guuleystay koobkiisi ugu horeeyay tan iyo intii uu noqday tababaraha kooxdaasi, waxaana kooxda uu leyliyo Guardiola ay ciyaarta kama dambeysta ee koobka Carabao kaga adkaatay kooxda kale Arsenal.
Weeraryahanka kooxda City, Sergio Aguero ayaa daqiiqada markay aheyd 18, waxaa uu kooxda City u dhaliyay goolkii ugu horeeyay, kadib markii uu ka faaidesytay kubad si lama filaan ah usoo dulmartay difaaca kooxda Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa u muuqatay mid dhulka is dhigtay, kahor inta aanu Vincent Kompany lugta la helin kubad la soo tuuray, waxaana ciyaarta ay sidaasi ku noqotay labo iyo eber.
Hasayeeshe xaaladda Arsenal waxaa mid rajo beel ah ka dhigay Silva oo goolkii saddexaad ka dhaliyay kooxda Arsenal, sidaasi na waxaa kusoo idlaatay ciyaarta kama dambeysta ee Carabao Cup oo Arsenal ay ku hanweyneyd inay ku guuleysato.
Ciyaaryahankii ugu ciyaar wanagsanaa
Guardiola ayaa muujiyay sida uu ugu kalsoonyahay awooda iyo kartida kaptanka kooxda Man city Kompany.
31 jirkan u dhashay dalka Beljamka ayaa hogaanka kooxdaasi hayay in muddo ah, waxaana intii uu joogay kooxda Man City ay ku guuleysatay labo xili ciyaareed oo horyaalka ingiriiska xiliyadii ay Man city hogaaminayeen tababarayaasha kala ah Roberto Mancini iyo Manuel Pellegrini.
Tababare Pep Guardiola oo sidookale horumar ka sameeyay kaalinta kooxda Man city ay kaga jirto horyaalka ingiriiska ayaa haddii kooxdiisu oo imika horyaalka ku leylineysa 72 dhibcood ay ku guuleysato, waxaa uu noqonayaa mid horumar badan kusoo kordhiyay kooxda City.